Hotel Transylvania2(2015) | MM Movie Store
2012 က အောငျမွငျကြျောကွားလူကွိုကျမြားခဲ့လို့ အခုသူ့ရဲ့နောကျဆကျ2015မှာ Part 2အနနေဲ့ထပျထှကျလာတဲ့ Animation ကားလေးတဈခုကိုတငျပေးပါရစေ။IMDb Rating7အထိရရှိထားပွီးတဲ့ ဒီကားလေးကိုအားလုံးပဲမြှျောလငျ့နကွေမှာပါ။
ဒီဇာတျကားလေးဟာမကောငျးဆိုးဝါးလေးတှနေဲ့ဇာတျလမျးစထားခဲ့ပွီး . Draculaဘုရငျတဈပါးရဲ့သမီးလေးနဲ့ခဈြကွိုကျခဲ့တဲ့ လူသားတဈဦးတို့ရဲ့ အခဈြမတ်ေတာနဲ့ပေါငျးစပျလကျတှဲမှုကို အခကျြကကြသြဘောကဖြှယျ ဖနျတီးထားပါတယျ။
Part 1 မှာ ခဈြကွိုကျခဲ့တဲ့ Dracula မလေး Mavis နဲ့လူသားလေး Jonathan တို့ရဲ့ လကျထပျ မင်ျဂလာဆောငျပှဲကနစေထားပါတယျ။Mavis နဲ့ Jonတို့ဟာ လကျထပျပွီးကာလတဈခုမှာသားလေး တဈယောကျမှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ဒီဇာတျကားမှာတှရေ့မှာက အဘိုးဖွဈသူ Count Dracula ရဲ့သူ့ မွေးလေးအပျေါထားတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို လှလှပပဖှဲ့နှဲ့သှားခဲ့ပွီးသူ့လိုပဲမွေးလေးကိုမှျောအတတျတှကြှေမျးကငျြတဲ့Dracular လေးတဈဦးဖွဈစခေငျြတာကိုလညျးတှရေ့ပါမယျ။
Spoiler ဖွဈသှားမှာစိုးလို့ ဇာတျကားအကွောငျးကို ဆကျလကျမပွောပွတော့ပါဘူးMovie သာဆကျလကျကွညျ့ရှုကွပါ။ခတျေနဲ့လြျောညီအောငျ တငျဆကျထားပွီး . Sony Entertainmentကထုတျလုပျထားတဲ့အတှကျ Sony Product မြားကိုပါသုံးနှုနျးသှားတာဟာ ကွျောငွာတဲ့ဘကျကိုမသိသာစဘေဲ ဟာသအဖွဈနဲ့တငျဆကျနိုငျခဲ့တာပါ
ဒီဇာတျလမျးကိုရေးသားခဲ့တဲ့ Robert Smigel နဲ့Adam Sandler တို့ရဲ့ ပွောငျမွောကျတဲ့လကျရာတဈခုပါပဲ။ဒါရိုကျတာ Genndy Tartakovsky ရိုကျကူးထားပွီးရုံတငျပွသခဲ့ခြိနျမှာလညျးအောငျမွငျတဲ့ကားတဈကားဖွဈနပေါတယျ။အဲ့ထကျပိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာကအသံပိုငျးဆိုငျရာသရုပျဆောငျမြားပါပဲ .
ဇာတျညှနျးရေးဆရာ ၂ ဦးလုံးဟာဇာတျညှနျးရေးပေးရုံမကဘဲCount Dracula နရောမှာ Adam Sandler ကသရုပျဆောငျပွီး .Jonathan နရောမှာ Robert Smigelတို့ကသရုပျဆောငျပေးထားပါတယျ။နောကျထပျတဈယောကျကတော့ 2012 Part 1 ထှကျတုနျးကကြှနျတျောတို့လုံးဝသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။
Dracula မလေး Mavisရဲ့နရောကိုအသံသရုပျဆောငျပေးတာဟာ မငျးသမီးခြောလေး Selena Gomez ပါပဲ။ကဲ ဒီတော့ ပရိတျသကျကွီးရေ . . . Animation ဇာတျကားကောငျးကောငျးလေးကိုကျောဖီလေးတဈခှကျနဲ့သာဇိမျကကြကြွညျ့ရှုဖို့ Download သာဆှဲကွပတေော့ဗြို့ ။
2012 က အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့လို့ အခုသူ့ရဲ့နောက်ဆက်2015မှာ Part 2အနေနဲ့ထပ်ထွက်လာတဲ့ Animation ကားလေးတစ်ခုကိုတင်ပေးပါရစေ။IMDb Rating7အထိရရှိထားပြီးတဲ့ ဒီကားလေးကိုအားလုံးပဲမျှော်လင့်နေကြမှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာမကောင်းဆိုးဝါးလေးတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းစထားခဲ့ပြီး . Draculaဘုရင်တစ်ပါးရဲ့သမီးလေးနဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ဦးတို့ရဲ့ အချစ်မေတ္တာနဲ့ပေါင်းစပ်လက်တွဲမှုကို အချက်ကျကျသဘောကျဖွယ် ဖန်တီးထားပါတယ်။
Part 1 မှာ ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Dracula မလေး Mavis နဲ့လူသားလေး Jonathan တို့ရဲ့ လက်ထပ် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကနေစထားပါတယ်။Mavis နဲ့ Jonတို့ဟာ လက်ထပ်ပြီးကာလတစ်ခုမှာသားလေး တစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ဒီဇာတ်ကားမှာတွေ့ရမှာက အဘိုးဖြစ်သူ Count Dracula ရဲ့သူ့ မြေးလေးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လှလှပပဖွဲ့နွဲ့သွားခဲ့ပြီးသူ့လိုပဲမြေးလေးကိုမှော်အတတ်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့Dracular လေးတစ်ဦးဖြစ်စေချင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်။
Spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ဇာတ်ကားအကြောင်းကို ဆက်လက်မပြောပြတော့ပါဘူးMovie သာဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါ။ခေတ်နဲ့လျော်ညီအောင် တင်ဆက်ထားပြီး . Sony Entertainmentကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် Sony Product များကိုပါသုံးနှုန်းသွားတာဟာ ကြော်ငြာတဲ့ဘက်ကိုမသိသာစေဘဲ ဟာသအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်နိုင်ခဲ့တာပါ
ဒီဇာတ်လမ်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့ Robert Smigel နဲ့Adam Sandler တို့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့လက်ရာတစ်ခုပါပဲ။ဒါရိုက်တာ Genndy Tartakovsky ရိုက်ကူးထားပြီးရုံတင်ပြသခဲ့ချိန်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအသံပိုင်းဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်များပါပဲ .
ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ ၂ ဦးလုံးဟာဇာတ်ညွှန်းရေးပေးရုံမကဘဲCount Dracula နေရာမှာ Adam Sandler ကသရုပ်ဆောင်ပြီး .Jonathan နေရာမှာ Robert Smigelတို့ကသရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ 2012 Part 1 ထွက်တုန်းကကျွန်တော်တို့လုံးဝသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။
Dracula မလေး Mavisရဲ့နေရာကိုအသံသရုပ်ဆောင်ပေးတာဟာ မင်းသမီးချောလေး Selena Gomez ပါပဲ။ကဲ ဒီတော့ ပရိတ်သက်ကြီးရေ . . . Animation ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးကိုကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့သာဇိမ်ကျကျကြည့်ရှုဖို့ Download သာဆွဲကြပေတော့ဗျို့ ။